Koombiyuutarka Videos gal YouTube
Talinayo Qaabka Wixii koombiyuutarka Videos gal YouTube
> Resource > YouTube > talinayo Qaabka Wixii koombiyuutarka Videos gal YouTube
Waqtigan xaadirka ah, YouTube taageertaa iyo aqoonsan videos faylasha ku jira qaabka wmv, AVI, MOV, 3GP, MPEG, MP4, FLV, Jabbuuti, WebM iyo MKV (h.264) . Ayaa xadka of file video waa 2GB leh ugu badnaan xallinta ilaa 4K . Waxa kale oo aad eegi kartaa adiga xadka koombiyuutarka ee hadda ka jirta xisaabta ee page feature. Haddii aad u baahan tahay si ay u geliyaan file video oo la socda in ka badan 15 daqiiqo ah, aad leedahay si ay kor in ay ama saaxiib ama la kordhiyo goobaha Upload ah. Fadlan guji halkan lagu siiyo tilmaamo ku saabsan sida loo kordhiyo xadka koombiyuutarka.
Wixii Upload ah file size video in uu ka badan yahay waxa la ogol yahay, fadlan hubi in aad browser waa nooca ugu dambeeya. Waxa kale oo ay noqon doonto ugu wanaagsan ee aad ugu qortid video ee muuqa of 16: 9 ; haddii kale waxaad ka heli doontaa adiga oo video uploaded of 4: 3 lagu buriyay ama fidiyey la baararka madow dhibsado qiyaastii hal mar waa ay ku biiro inuu ciyaaro widescreen.
On top of in, YouTube sidoo kale si toos ah loogu badalo doonaa lagana filaayo in videos aad sida qaab Flash Video (FLV) sidaas darteed waa playable ciyaaryahanka FLV ee YouTube ee. Sidaa awgeed, waxa si weyn lagu talinayaa in aad geliyaan videos in HD for loo maqli karo tayada ee la aqoonsan yahay ku suntan oo kale oo leh sida H.264, MPEG-2 ama MPEG-4 . Haddii ay suurtagal tahay, isku day in aad sii heerka jir asalka ah . Ama haddii kale, si loo hubiyo in ay tahay inta u dhaxaysa 25 ilaa 30fps. Fiiri wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Deji sare dejinta halkan .
Sida ee audio la socda , nooca file talinayaa in uu noqon doono mid ka mid ah MP3 ama AAC heerka sampling 44.1kHz aaday kooxda ugu macquulsan oo sare bitrate (aan ka yarayn 192kbps) . Si kastaba ha ahaatee, ma ahan wax aan caadi ahayn in dadka isticmaala lagu keentay in la fariin la mid ah baadi sheegaya in faylasha ay yihiin labada ma taageersana ama aqoonsan yahay. Sidaas waxaa laga yaabaa in qiimo aad u leedahay baaritaan deg deg ah in il ama video asalka kharribmay oo isku day mar kale geliyaan faylasha aad.
Haddii fariin ku baadi la mid ah waxaa lagu keentay in mar kale, suurtagalnimada waa in audio iyo video codec aan la aqoonsan yahay, maxaa yeelay qaab faylka waa uun weel kaydinta audio iyo video files. Haddii ay sidaa tahay, waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad ka fiirso Wondershare Video Converter Ultimate .
Si fudud raac tallaabooyinka hoose si loogu badalo ama xataa xaalkaa aad videos ka hor inta uploading gal YouTube.
1 Change video goobaha
Si aad u beddesho video ee goobaha, guji kaliya Settings sida iftiimiyay in casaan ee shaashada ka. U yeelan doontaa inaad la qabsato heerka jir aad video ay ku bitrate iyo wax ka badan u meel aad audio ee Waxaad.
2 Edit videos
Waxa kale oo aad ka bedel kartaa video files leh Video Converter Ultimate si fudud iyadoo la isticmaalayo hawlaha tafatirka dhisay-in. Waxaa jira Warbixannada button haddii doonayo in ay dib-u-samayn ilaa aad ku qanacsanayn natiijada.
3 Beddelaan videos
Markaad dhammayso sixiddiisa aad videos, waxaad yeelan doontaa si aad u hesho qaabka wax soo saarka horena ee YouTube Video in uu ka mid ahaa in Video Converter Ultimate ee laguugu sahlo. Dhamaan inaad hadda samayso waa in guji badalo . Waxaa laguu sheegi doonaa fariin pop-up mar diinta ayaa dhameystirtay. Ka dib markii in, aad dib u soo ceshano kartaa in aad ku badaley videos, waana diyaar u rara gal YouTube!
Sida loo Download Videos ka YouTube Waxbarashada kanaalada
Sida loo sameeyo GIF ka Video YouTube ah
Sida aad u gashanayso YouTube Video galay PowerPoint
Waa maxay YouTube Music iyo Samee YouTube sida Personal Music Source
Sida loo Dhegayso YouTube Online, offline iyo Software
YouTube ma ciyaari doono? Download YouTube Flash Player ama Isku day HTML5
Sida lagu Helo Audio ka YouTube fudayd